ဘယ်မှာရှာဖို့ဥရောပအများဆုံးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဗိသုကာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘယ်မှာရှာဖို့ဥရောပအများဆုံးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဗိသုကာ
သင်၏နောက်အားလပ်ရက်တွင်ထူးကဲကောင်းမွန်သောဗိသုကာလက်ရာအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေနေသည်? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဥရောပထက်မပိုကောင်းသောအရပ်ဌာနလည်းမရှိ. သငျသညျဂန္ထဝင်ဗိသုကာစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်မျှော်လင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ် အချို့ပြောင်-လူသိများရှာတွေ့ ရတနာ, သငျသညျဥရောပမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ. ရဲ့ခမ်းနားဗိသုကာအချို့ကိုဥပမာမှာကြည့်ကြပါစို့အဘယ်မှာကအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်:
အီတလီ သငျသညျလှပသောအဆောက်အဦးများစောင့်ကြည့်ပျောက်သွားနိုင်သောရှိရာမြို့ကြီးများနှင့်အသေးစားမြို့များနှင့်ပြည့်ဝ၏. သင်၌နေပဲဖြစ်ဖြစ် ရောမမြို့ သို့မဟုတ် Florence, နီးပါးတိုင်းထောင့်ပုံရကျိုးနပ်သည်. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သေးငယ်တဲ့မြို့များရှာနေခရီးသွားဧည့်များအတွက်, Vicenza သည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်. သငျသညျနေပါလျှင်အားဖြင့်ဒါဟာနီးကပ် ဗင်းနစ်မှသို့မဟုတ်ရထားယူပြီး, ထို့အပြင်တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိအရာဖြစ်ပါသည်. Vincenza ယင်း၏အဘို့အ famed နေစဉ် Renaissance ဗိသုကာစတိုင် Andrea Palladio ၏စိတျထဲမှာပဋိသန္ဓေယူ, ဘာသာစကား Venetian ဗိသုကာမကြာခဏ Gothic အဘိဓါန်ဖြစ်ပါသည်, ပီပီ, ပြီးတော့လှတယ်.
အခြားအအီတလီမြို့တို့တွင်သင်သည်လက်လွတ်မနိုင်, ရောမမြို့နှင့်ဖလောကိုလည်းအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်. ရောမမြို့အဓိကအားဖြစ်ပါသည် အထင်ကရအဆောက်အအပြည့်အဝ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်တစ်ကြိမ်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ Colosseum, စိန့်. ပေတရု၏ Basilica, Pantheon, နှင့် Trevi စမ်းရေတွင်း၌ အားလုံးလာရောက်လည်ပတ်ထိုက်သည်. သို့သော်ငြားလည်း, Florence ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအရောအနှောရှိပါတယ်, အထူးသရှေးဟောင်းဂရိနှင့်ရောမဗိသုကာ, Gothic အဘိဓါန်များနှင့် Renaissance.
ပြင်သစ်နေရာဖြစ်သည် မည်သည့်အံ့ဖွယ်ဗိသုကာချစ်မြတ်နိုးတဲ့အသက်ရှူစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုစတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူအနည်းငယ်မြို့ကြီးများမှ. တစ်ဦးအလည်အပတ်များအတွက်ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနက်, Strasbourg, ဘော်ဒိုး, နှင့် ပဲရစ် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အရှိဆုံးပူဇော်.
ကြည့်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်နှင့် Strasbourg ပြု, Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာ၏သိသာထင်ရှားသောဥပမာများအပါအဝင်, ခေတ်မီခြင်းနှင့် postmodern ခရိုင်နှင့် Alsatian ဗိသုကာနှင့်အတူရောယှက်. ဘော်ဒိုးလည်းထူးခြားသည်. အဆိုပါ Aquitaine ဒေသအတွက်အကြီးဆုံးမြို့တော်တစ်ခုအလွ 18 ရာစုမြို့ပြဇုန်ဂုဏ်ယူ, အဆိုပါ Bourse ၏နန်းတော်, နှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းစိန့်အန်ဒ. နောက်ဆုံး, ပဲရစ် Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာ၏မွေးရပ်မြေတစ်ဦးအဖြစ်ကျော်ကြား, ဒါပေမယ့် Belle Epoque အမျိုးမျိုးဥပမာလည်းကြွယ်ဝတဲ့င် အတတ်ပညာ အသစ်က.
တှငျတှေ့ခံရဖို့ဗိသုကာကျောက်မျက်များများရှိပါတယ် ဂျာမနီ. သို့သျောလညျး, အများဆုံးအထင်ကြီးသူမြားကိုနှစျယောကျများမှာ ဘာလင် နှင့် Rothenburg. ဗိသုကာများသောအားဖြင့်သမိုင်းနှင့်အတူလက်၌လက်သွားသည်, သငျတို့သဘာလင်ရှင်းလင်းစွာဒီ connection ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. အဆိုပါမြို့တစ်ချိန်ကပိုင်းခွဲထားသည်, နှင့်အချို့နေရာများ၌ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်မယ့်. ဒါကြောင့်နေရာကောင်းတခုစေသည် အတှေ့အကွုံ ဗိသုကာနှင့်ထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များ သမိုင်း အနုပညာလွှမ်းမိုးမှု.
သို့သော်ငြားလည်း, ဒါကြောင့်ဖြောင့်မှထွက်လာသောတူသော Rothenburg တဲ့နေရာရှာနေတာဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်. ဤသည်အိပ်ချင်, အလယ်ခေတ်-ရှာဖွေနေမြို့တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ခရီးသည် အကြိုက်ဆုံး. ဒါဟာသူ့ရဲ့မြို့မြို့ရိုး, gabled ခေါင်မိုးနှင့်အတူကြော့ဥရောပအလယ်ခေတ်ဗိသုကာတစ်ဦးချုပ်ဥပမာင်.
Nuremberg Rothenburg မှရထား
ဥရောပတဆင့်ခရီးသွားလာရကျိုးနပ်သည်, သငျတို့သသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ကွိုးစားသငျ့သောများစွာသောအခြားလှပသောသောနေရာများရှိပါသည်. ခမ်းနားဗိသုကာအတွက်ပေါများ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, သြစတြီးယား, ဆွီဒင်, ပြီးနောက် နယ်သာလန် အဖြစ်ကောင်းစွာ.
သင်သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏ဗိသုကာမျက်မှောက်-မြင်နေလေ့လာရေးခရီးအဘို့သင့်ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်မှအဆင်သင့်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတက်ကြည့်ရှုအတူ တစ်ဦးရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဗိသုကာအတတ်ပညာ	ခရီးသွား	ခရီးသွားများ	ခရီးသွားခြင်း